Mgbe mbụ e mepụtara nyiwe akpaaka izizi, isi ihe kachasị elekwasị anya bụ imepụta nkwukọrịta email. Email bụ ọwa dị ọnụ ala na nnukwu ROMI ebe azụmaahịa nwere ike soro ma kọọ arụmọrụ ha. Agbanyeghị, email abụghị naanị ọkara. Re ahịa bụ izipu ndị ahịa ziri ezi ozi ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị - na MAP na-enyere nke a aka.
Ihe Nlereanya: N’oge na-adịghị anya, m nyeere onye ahịa aka ịgba ọsọ webinar ha na-eme ka igwe nrụpụta ọrụ ha na-ere ahịa. Site na ndebanye aha tupu oge, nnabata ụbọchị ihe omume, na ntinye ihe na - esochi - ọ bụ usoro akpaghị aka gafere email na ntanetị ọwa ozi. Ọdịmma akpaaka azụmaahịa email agaghị enyere anyị aka imezu ebumnuche anyị.
Ihe Nlereanya: Onye ahịa e-commerce chọrọ ịbawanye ego site na ọwa email n'ihi na ọ bụ naanị ọwa ahịa azụmaahịa na-eji ugbu a ma ha nwere nnukwu nchekwa data. Ha nwere ike ọ gaghị enwekwa mkpa akpaaka… ndị na-eweta ọrụ email (ESP) yana onye ahịa azụmaahịa nwere ahụmahụ nwere ike ị nweta nsonaazụ niile. Kedu ihe bụ isi nke ifufu ihe karịrị ugboro ise iji were MAP na-eme otu ihe ahụ?
Ihe kariri ọkara nke ndị ahịa m ahọrọla ikpo okwu na-enweghị talent dị n'ime ya. N'ihi ya, ha kwụsịrị ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ na-ere ahịa iji jikwaa ya. Ego ahụ na-ebelata nloghachi na ntinye ego ma nwedịrị ike ime ka ọ bụrụ mfu. Ndị ụlọ ọrụ na-abụkarị ndị dị mma na-enyere gị aka na ntinye MAP gị, mana ọ bụ nnukwu ego maka ọtụtụ azụmaahịa pere mpe na ọkara iji were ha na-aga n'ihu.
Na mgbakwunye, imirikiti ndị na-ere MAP na-eme nyocha A / B iji bulie nsonaazụ mgbasa ozi. Nke a ga - akwalite nsonaazụ ahịa gị… site na imelite oge yana izi ozi ị na - eziga onye ahịa gị. Chọta ndị ahịa na omume ha, na ịkekọrịta ìgwè mmadụ ọ bụla ga-eji ọdịiche omume na-azụ ndị ahịa.